Mpanamboatra sy mpamatsy sehatra Aluminium | China Aluminium Work Platform Factory
Sehatra fiasa aidina aliminiomaHita tao amin'ny `` https://mg.wiktionary.org/w/index.php?title=fifampikotranao&oldid=18879768 '' Ireo fitaovana dia mandray ny mombamomba ny alimo alimina matanjaka mba hampihenana amin'ny fomba mahomby ny familiana sy ny fikorontanana.
China Aerial Work Plaform Telescopic karazana mpamatsy tsara
China Aerial Work Platform Telescopic type miaraka amin'ny Self propelled Control Mode no vokatra vaovao navoakanay tato ho ato. Ny tombony tsara indrindra dia ny fananana Aerial plateforme izay kely dia kely ary afaka miasa tsara amin'ny toerana ety na trano fanatobiana entana. Ankoatr'izay, ny endrika sy ny asa-tanana tena tsara! Mifandraisa aminao
Single Mast Aerial Work Platform miaraka amina rafitra Compact, afaka miditra amin'ny lalana ety; mombamomba ny alimo alimina mahery, lanja maivana, tanjaka avo, fisondrotana milamina, tsy misy tsipika mihantona, mandady mandady, tsy misy tabataba tsy mahazatra;
Amin'ny alàlan'ny sehatr'asa alim-baravarankely vita amin'ny alimo tokana dia mampitombo ny velaran'ny latabatra sy mampiakatra ny haavon'ny lampihazo ny lampihazo roa alimo alimo vita amin'ny alim-baravarankely, mba hahafahany mizatra amin'ny asa an'habakabaka avo kokoa.
High Configuration Dual Mast Aluminium Aerial Work Platform dia manana tombony maro: Fampiasan-dresaka efatra Outrigger, asan'ny deadman, fiarovana avo lenta rehefa miasa, herinaratra AC amin'ny lampihazo ho an'ny fampiasana fitaovana elektrika, valizy mitazona varingarina, asan'ny fanoherana, fipoahana forklift mahazatra ho mora entina .
High Configuration Single Mast Aerial Work Platform dia manana tombony maro, Four Outrigger Interlock function, Deadman switch function, fiarovana avo lenta rehefa miasa, herin'ny AC amin'ny sehatra fampiasana fitaovana elektrika, Cylinder Holding Valve, anti-explosion function, Standard forklift hole ho mora entina. .....
Tsotra, maivana ary mora mihetsika ny sehatra fananganana alim-baravarana alimika vita amin'ny alim-by. Mety amin'ny fampiasana azy io amin'ny sehatry ny asa tery. Ny mpiasa iray dia afaka mamindra sy mampandeha izany. Na izany aza, ambany ny fahaizan'ny entana ary tsy afaka mitondra entana na fitaovana maivana fotsiny. Mila mpiasa manangana tanana ilay fitaovana ho .....
Izy io dia mandray unitie hydraulic, miaraka amin'ny valizy, ary ny fihenan'ny vonjy taitra. Ny maodely tsirairay dia azo ampitaina amin'ny herin'ny bateria arakaraka ny fitakian'ny mpanjifa. Mampiasà tarika elektrika tsy miankina mitambatra, miaraka amin'ny fiarovana ny fanitsakitsahana sy fiarovana be loatra. Ny fitaovana dia namboarina niaraka tamin'ny takelaka fanaraha-maso roa tsy miankina mba hahafahan'ny mpiasa mifehy ny fitaovana na dia eo amin'ny lampihazo na amin'ny tany aza izy ireo. Ho fanampin'izany, tsy maintsy amporisihintsika amin'ny fomba hentitra ny sehatr'asa aliminioma natosiky ny tenantsika. Ny mpiasa dia afaka mifehy mivantana ny fivezivezena sy ny fampiakarana ireo fitaovana eo ambony latabatra. Io fiasa io dia mahomby indrindra rehefa miasa ao amin'ny trano fanatobiana entana ary mamonjy ny fotoana fiasana manokatra sy manidy ny tongotra.